Shina lohan-jiro avo lenta ary mpamatsy | SAMOELA
modely: Varingary Piston
Modely azo ampiharina: Ford FOCUS-DV6 2.2
Famindran-toerana amin'ny fiara: 2.2L
Isan'ny varingarina: 16
Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena, milina mpamokatra generator, kalitao namboarina, manana endrika tsara, hakitroka, malama, famirapiratana ary faharetana aorian'ny famaranana. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
Ny fepetra sy ny fepetra takiana amin'ny lohan'ny varingarina
Ny lohan'ny varingarina dia mitondra ny enta-mavesatra mekanika ateraky ny herin'ny gazy sy ny fanamafisana ny lohan'ny lohan'ny varingarina, ary miaraka amin'izay dia mihatra amin'ny enta-mavesatra mafana izy noho ny fifandraisany amin'ny lasantsy avo lenta. Mba hahazoana antoka ny tombo-kase tsara amin'ny varingarina, ny lohan'ny varingarina dia tsy azo simba na simbaina. Noho izany antony izany dia tokony hanana tanjaka sy henjana ny lohan'ny varingarina. Mba hahatonga ny fizarana mari-pana amin'ny lohan'ny varingarina ho fanamiana araka izay azo atao ary hisorohana ny triatra amin'ny hafanana eo anelanelan'ny fipetrahana sy ny valin'ny valizy, dia tokony hampangatsiaka tsara ny lohan'ny varingarina.
Lohan'ny varingarin'ny fiara mitondra kalesy:
modely Varingarina piston
Modely azo ampiharina amin'ny fiara Ford FOCUS-DV6 2.2
Famindrana fiara 2.2L
Isan'ny varingarina 16
Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena.
Previous: Mpanamboatra lehibe ho an'ny Piston Crankshaft - Crankshaft fanariana motera ho an'ny Perkins135 miaraka amin'ny laharana Oem 31312730 ho an'ny vidin'ny orinasa - SAMUEL
Manaraka: Camshaft avo lenta
Lohan'ny varingarina fiara